Molweni bahlobo! My incwadi Vuka u khulula ngoJanuwari 27 (kwiveki elandelayo!) kwaye ndidinga uncedo lwakho. We’re looking for people who can help be a part of a Street Team and help...
Ndandidlala Varsity ngaske kwisikolo aphakamileyo. Nantso ingxelo kwakuyinyaniso (ngaphandle kokuba ukundinyanzela ukuba ukuchaza umdlalo igama). Ndaya kwisikolo esincinane yabucala, and if you were a senior...
Ndandineminyaka elishumi elinesihlanu ubudala kwaye ziyajikiswa ubomi bam ngaphakathi ngaphandle. igama lam ukubonakala ayizange iguquke, kodwa yonke enye into ngam kwafuneka. I was a completely different person than I...
Lo umyalezo emfutshane evela Advance College leNkomfa e Raleigh, NC. Unokufunda ngqangi ngezantsi: I want to speak to you very briefly about using our gifts for the glory of...
Here are all the lyrics for Trip’s fifth studio album Rise. Klikha kwisihloko ngoma ukubona lyrics for kwingoma nganye. Konwabele kwaye sabelane kunye nomhlobo! 1. phakama 2. Lights...